सवारी संकेतमा पनि अंग्रेजी ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
सवारी संकेतमा पनि अंग्रेजी !
२०७७ आश्विन ३०, शुक्रबार ०९:२२ गते
विश्वका कैयौँ देशहरु यस्ता छन् जुन राष्ट्रभाषाकै सर्वाङ्गीण विकास गर्नमा दत्तचित्त रहिरहेछन् । आधारभूत तहदेखि महाविद्यावारिधिसम्मका सम्पूर्ण शैक्षणिक कार्यकलाप राष्ट्रभाषामा नै सम्पादन गरिन्छन् । अंग्रेजीबाहेकका सम्पूर्ण विषयका पाठ्यपुस्तकहरुमा राष्ट्रभाषा नै लेखिन्छन् । बोलीचालीदेखि सम्पूर्ण कार्यालयीय व्यवहार पनि राष्ट्रभाषा नै सम्पादन भइरहेको हुन्छ । वस्तुको विज्ञापनदेखि र फलानो चीजको पसल भन्ने जानकारीका निम्ति राखिने पार्टीहरु र कार्यालयीय प्रयोजनका निम्ति राखिने अभिलेखीकरणहरु पनि राष्ट्रभाषामै राखिन्छन् । चाहे त्यो यातायातका साधनहरुमा राखिने सूचकाङ्कहरु हुन् चाहे आप्mनो देशभित्र किनबेच गरिने वस्तु आदि इत्यादिका खोलहरुमा नै किन नहोस्, स्वराष्ट्रभाषाकै उपयोग हुने गरेको देखिन्छ । सर्वसाधारण जनता पनि स्वभाषा र मातृभाषाका जानकार हुन्छन् र आप्mनो भाषाप्रति पनि उत्तिकै लगाव राख्छन् । उनीहरुमा आप्mनो देशीय भाषा भनेपछि हुरूक्क हुने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
यदि दोस्रो, तेस्रो मुलुकहरुमा निर्यात गरिने वस्तु, पदार्थ आदि इत्यादि भएमा मात्र अन्तर्राष्ट्रि««य भाषा उपयोग गरिन्छ । त्यहाँ पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गर्ने निकायदेखि कूटनैतिक क्षेत्रमा कार्य गर्न रूचि राख्नेले मात्र अंग्रेजीको अध्ययन गर्दछन् । अन्यथा, सबै व्यवहार स्वराष्ट्रभाषाकै माध्यमबाट सम्पादन हुने गर्दछन् । त्यसैले, त्यहाँका नागरिकमा राष्ट्रिय चेतना र भावना सबल मात्र नभई राष्ट्र र राष्ट्रिय भाषाहरु समृद्ध बन्न गएका छन् । चीनको राष्ट्रभाषा र जापानका राष्ट्रभाषा यस्ता भाषामा गनिन्छन् ।
यी देशले भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि दृष्टिले मात्र नभई औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन् । उनीहरुले सञ्चार र सञ्जालका क्षेत्रमा गरेको क्रान्ति विश्वका निम्ति अनुकरणीय बन्दै आएको पनि छ । यहाँसम्म कि ती देशका प्रतिव्यक्ति आयको सूचक हेर्ने हो भने सम्भवतः सर्वाधिक अग्रस्थानमा छन् भन्ने लाग्छ । यस दृष्टिले आर्थिक तथा गार्हस्थ्य उत्पादकत्वका आधारमा समेत उनीहरु अगुवा नै देखिँदै आएका छन् ।
त्यहाँका नागरिकदेखि नेतृत्व पंक्तिमा समेत स्वाभिमान र स्वत्वबोध झन् कति अनुकरणीय छ त्यहाँको । कम बोल्ने ज्यादा काम गरेर देखाउने, काम गरिसकेपछि मात्र जानकारी दिने, अनावश्यक नबोल्ने, जति बोल्नु अपेक्षित छ त्यति मात्र बोल्ने, बोलीमा भन्दा काममा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति झन् अझ उन्नत सोच लाग्छ । यसमा स्वमातृभाषा र मातृभाषाजन्य संस्कारले जन्माएको हो भन्ने लाग्छ । यी सारा शक्ति र तागतको स्रोत हो स्वराष्ट्रभाषा र यसको सुगन्ध । यसैले उनीहरुभित्र खँदिलो अस्तित्व र ऐश्वर्य प्रदान गरेको देखिन्छ ।
तर, दुःखद कुरा हाम्रा सन्दर्भमा आप्mनो भाषामाथि भन्दा अन्तर्र्रािष्ट्रय भाषा ग्रहण गर्ने निहुँमा राष्ट्रभाषामाथि कुठारघात गरिरहेको परिस्थिति छ । यसबाट राष्ट्रभाषा मात्र नभई तमाम मातृभाषा र क्षेत्रीय भाषाहरु पनि चितामा पुगिरहेछन् । कतिपय भाषाहरु मृतप्रायः अवस्थामा पुगिरहेछन्, कारण अंग्रेजी भाषाप्रतिको अतिशय मोह । यसले राष्ट्रिय चेतना र भावना कमजोर त बनिरहेछ नै सारा शक्ति र स्रोतहरु नै खडेरी परेका बेलाको खोलाजस्तै बन्दै गइरहेछन् । हामीकहाँ पनि अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तारका साथै अंग्रेजी भाषामा लिखित ज्ञान ग्रहण गर्नका निम्ति सिकिनुपर्ने हो तर त्यसको ठीक उल्टो भइरहेछ यहाँ । सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यता हासिल गर्ने यो माध्यम बनिरहेछ । नेपाली विषयबाहेकका सबै विषय शिक्षणमा अंग्रेजी नै उपयोग भइरहेछ । पूर्वआधारभूत तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका शैक्षणिक पाठ्यपुस्तक र सामग्रीहरु पनि अंग्रेजीमा नै हुनु सामान्य बनिरहेछ हामीकहाँ ।
विज्ञान, लेखाशास्त्र आदि विषयहरुको पठनपाठनका निम्ति लेखिने पाठ्यपुस्तक नेपालीमा पाइन्नन्, साराका सारा अंग्रेजीमा मात्रै लेखिन्छन् । स्नातक तहका नेपाली विषयबाहेकका प्रायः सबैजसो कक्षाहरुको सिकाइ माध्यम र परीक्षाका माध्यम भाषा नै अंग्रेजी मात्रै बन्ने गरेको छ अहिले । लब्धांकपत्र र प्रमाणपत्र आदि इत्यादि समेत अंग्रेजीमा नै लिनु र दिनुलाई गौरवका रुपमा हेरिने गरेको छ । यहाँसम्म कि संस्थागत प्रणालीअनुरुप खोलिएका विद्यालय र महाविद्यालयहरुको नाउँ पनि अंग्रेजीमा राख्नु र त्यहाँ पढ्नु÷पढाउनुलाई समेत गौरवका रुपमा हेर्ने गरिएको छ ।
बैंकका सेवाग्राहीहरु प्रायः नेपाली पनि बडा मुस्किलले चिन्ने र लेख्ने गर्छन् । तर दुर्भाग्य ! त्यहाँका भौचरदेखि चेक आदि इत्यादि हेर्ने हो भने सबका सब अंग्रेजीमा । त्यसको के अर्थ हुन्छ ? जब कि, बैंकका सेवाग्राहीहरु न त्यस्ता कोही विदेशी हुन्छन्, न त अंग्रेजीमात्र जान्ने नेपालीहरु मात्र हुन्छन् । यस्तोमा बैंकहरुको अंग्रेजीमोह स्वाभिमान र स्वराष्ट्रिय ज्ञान र चेतनाका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण लाग्छ । यति मात्र होइन कि अहिले विभिन्न पसलहरुका नाउँ र विज्ञापनहरु हेर्ने हो भने प्रायः अंग्रेजी भाषामा लेखिएका भेटिन्छन् ।
विभिन्न उत्पादनहरु हेर्ने हो भने पनि तिनका नाउँ पनि राखिएका भेटिन्छन् अंग्रेजीमा नै । अंग्रेजीमा नाउँ राख्नेबित्तिकै उत्कृष्ट रूचिकर र सुग्राह्य बनिहाल्ने र नेपालीमा राख्नेबित्तिकै निम्नतर, अरूचिकर र अग्राह्य पनि हुने सोचाइ बन्दै गइरहेछ हामीकहाँ । अंग्रेजीमा पढिए त्यो गुणस्तरीय शिक्षा, पुस्तकहरु पनि गुणस्तरीय नै बन्ने, हरेक विषयहरु पनि उत्कृष्ट नै हुने र नेपालीमा पढिए र पढाइए त्यो अनुत्पादक र अनुत्कृष्ट बन्ने सोच र चिन्तन हामीलाई अंग्रेजीले दियो । हुँदा हुँदा छोराछोरीका नाउँ, उनीहरुलाई गरिने सम्बोधनहरु पनि अंग्रेजी हुँदा प्रियकर, निकटतम बन्ने हुनु स्वाभिमान, स्वजातीय संस्कार, संस्कृति र स्वत्वबोधका हिसाबले अत्यन्त दुःखद र विडम्बनापूर्ण लाग्छ ।
सरकारले कम्तीमा पनि नेपाली भाषालाई मान्यता दिएकै थियो । अन्य भाषाहरुलाई पनि राष्ट्रभाषाको दर्जा दिएकै थियो । यस परिस्थितिमा अचानक सरकारले पनि किन र कसरी सवारीसाधनहरुको अभिलेखीकरण गर्ने, नाउँ राख्ने सूचकांकजस्ता (इम्बोस्ड/एम्बोस्ड) अभिलेखीकरण गर्नका निम्ति अंग्रेजीमा नै लेख्नुपर्ने प्रावधान राख्नु हरेक दृष्टिले दुर्भाग्यपूर्ण लाग्छ ।
स्वभाषा, स्वसंस्कृति, स्वसंस्कार, स्वात्म चिन्तन, स्वाभिमानबोध, स्वत्वबोधजस्ता आन्तरिक गुणहीन रहेका हामी नेपालीहरुमा अंग्रेजीप्रतिको लगाव, झुकाव र समर्पण हाम्रा निम्ति एउटा कालरात्रि सदृश हो । यसलाई टुलुटुल हेरिरहनु कुनै प्रतिरोध गर्न नसक्नु र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको परिधि र सीमामा मात्र राखिरहन नसक्नु हाम्रोजस्तो भौतिक र आर्थिक दृष्टिले कमजोर राष्ट्रका निम्ति दुरूह लाग्ला । तर, चीन र जापानजस्ता देशहरु पनि हिजो जिरोबाटै उठेर माथि आइपुगेका हुन् । त्यो बेला उनीहरुले स्वभाषा, स्वसंस्कार र स्वात्मबोधी चिन्तनकै कारण माथि उठेका हुन् ।
यसर्थ, अंग्रेजी भाषाको मोहले हामीलाई सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, वित्त, भौतिक समृृद्धिको गन्तव्यमा कदापि पु¥याउन सक्दै सक्दैन । बरू आफ्नै भाषा, आप्mनै प्रकृति, प्राकृतिक स्रोतसाधन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सभ्यता र सम्पदाको उचित संयोजन र उपयोगबाट मात्रै हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ । यसर्थ, सरकारले इम्बोस्ड÷एम्बोस्ड नम्बरदेखि हरेक क्षेत्र र विषयमा अंग्रेजीलाई मह¤व दिने प्रवृत्ति नत्यागेसम्म हामी सम्पन्न र समृद्ध बन्ने होइन झन्झन् दरिद्र र स्वत्वहीन बन्दै जानेछौँ । यसर्थ, अब सर्वसाधारण नागरिकदेखि देशका उच्च तह र राजनीतिक नेतृत्वले समेत नेपाली माटो, नेपालीपन, नेपाली भाषा, संस्कृति र प्रकृतिलाई उच्च मह¤व दिऔँ । तबमात्र, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली कथन र संकल्प पूर्ण हुन सक्छ ।